Ny herin'ny zokiolona amin'ny fampiasana ny fomangan'ny majika mainty amin'ny teny latinina dia mitaky hery mahery vaika. Amin'ny ankapobeny, ny magy mainty sy fotsy sy ny soritr'izy ireo dia karazana karazana sorcery sy kôpitaly rehetra avy amin'ny seotericism, izay tsy isalasalàna fa ilaina ny hianarana mba hahafantarana ny vokatry ny fifandraisana amin'ny tontolo hafa.
Karazana Black Eyelina
Miankina amin'ny lisitry ny boky magic mainty, zana-tsipika nozaraina:
Tsotra (avy amina teny iray ampiasaina amin'ny toe-javatra tsy ampoizina sy famonoana amin'ny fomba mahomby amin'ny hetsika akaiky amin'ny zavatra). Ohatra, ny "fanandevozana" - manandratra ny fisehon'ny fitiavana iray, na "abar" - mba hisorohana ny loza.
Ny fofona dia tetika tsotra mba hahazoana vokatra iray. Ohatra, afaka mandefa ny anjelinao ianao, manao hoe: "Anjely, avia hiaraka amiko. Mialoha ianao, manaraka anao aho. " Aorian'izany dia ho afaka handroso ianao raha tsy mimonomonona, miaro anao ny anjely iray.
Voafandrika - fikolokoloana amin'ny vokany roa, miteraka fihetsika sy fanoherana. Amin'ny ankapobeny, ny pao dia mifanandrify amina mari-pamantarana mahery vaika, ohatra, ny famonosana majika mainty ho an'ny fitiavana. Misy fombafomba toy izany ao amin'ny toeram-pandevenana, ary ny fanesorana azy ireo dia atao eo amin'ny toerana iray ihany, fa rehefa mampiasa dika roa (fambara toy izany).
Famosaviana (famolavolana singa) - dia ampiasaina amin'ny fombafomba sarotra, mampiasa "mpanampy" matanjaka avy amin'ny tontolo hafa. Manana karazana taratra mahery vaika izy ireo, ary ohatra iray azo antsoina hoe fahasimbana isan-karazany, indrindra ny fametahana majika maintin'ny fahavalo sy ny fananan'ny hafa.
Ny teti-bolany mahery vaika amin'ny majika mainty dia fanoherana mahery vaika, izay tsy nila afa-tsy, nanangona hery ampy ary nanamboatra fikasana iray. Sarotra ny manala izany ozona izany.
Famonoana majika mainty amin'ny fitiavana
Ilaina ny hametrahana labozia telo isa eo amin'ny lamba fotsy. Tsy maintsy vakiana intelo ny famantaram-potoana ary aorian'ny fotoana hamonoana labozia iray. Rehefa mivoaka avokoa izy ireo, dia mila mamatotra ireo labozia miaraka ary manazava azy ireo indray fa tsy misy ny soritra tavela amin'izy ireo. Ny Chad sy ny setroka dia tokony hivoaka amin'ny varavarankely, miaraka amin'ny andian-tsoratra.
Oh, lehibe ny Tompo, mivavaka aminao aho. Eny, mamorona rindrina tsy mety ritra. Ny lavaka mangitsokitsoka dia mamorona faribolana, fefy avy amin'ny zava-drehetra, be loatra ka tsy mandalo izany. Tovana - tsy misy farany sy sisiny. Ary ny haavony dia tsy azo ihodivirana. Ataovy izany, Tompo ô, aoka ho tanteraka izany, fa ny andevo (anarana) dia tsy mamela ahy. Tsy nijery zazavavy hafa aho. Afeno izany amin'ny maso feno fankahalana sy faniriana. Afeno ny fanalahidy. Amen.
Fikomiana ny majika mainty ho an'ny vola
Matetika, manantena ny hahita harena sy vola ny olona, ​​manontany tena hoe inona ireo teti-bolan-tsosika mainty ho an'ny harena ary ahoana no ahafahan'izy ireo mahatratra ny tombotsoa tadiavina amin'ny fanampiany. Ity tetikady manaraka ity dia heverina fa mahomby sy haingana.
Ao amoron-dranomasina manga dia misy seranan-tsambo,
Ao amin'io nosy io dia trano oak.
Ao amin'ny trano oak
Efa ela ny birao.
Misy magie volamena.
Isan-drohy isan'andro izy io, mitoloko sy mitsikitsiky.
Nihozongozona izy tao amin'io trano oaka kely io ary tany amin'ny nosy iray.
Nosaziko ho azy ilay mpanompo (nomena ahy).
Avia, ry malalako, miaina! "
Manana toerana malalaka be aho.
Afaka miaina amim-pilaminana ianao,
Tsy misy olona mangalatra anao, tsy mamono anao.
Miaraha hiaraka amiko! Raha ny marina dia ho voaro ianao.
Ary tsy te hijanona ao amin'ilay nosy ianao.
Ho an'ny olona maro ny fikomiana sy ny soritr'aretin'ny majika mainty dia mampatahotra, nefa na dia eo aza izany, dia mihamaro hatrany ny olona manana ny maha-izy azy.
Zava-dehibe ny manamarika fa misy fikorontanana môtika mainty ho an'ny vintana, izay hanampy amin'ny famahana olana sasany ary mitondra fifaliana amin'ny fahatanterahan'ny faniriana tiany, ny vintana tsara sy ny vintana amin'ny asa rehetra. Mba hanatanterahana fombafomba iray, ilaina ny zavatra iray izay tsy ho latsaka ao anatin'ny tànana diso, hanao heloka. Azonao atao ny milaza fa misy pensilihazo ary sokirina izany mba tsy ho hita. Mandritra ny dingana manontolo dia lazao izao manaraka izao:
Tompo ô, vonjeo, vonjeo, ary vonjeo aho, manompoa (anar).
Manontany an'i the theologian Ivan,
Ivan ny Batista,
Praskovya, ilay Maritiora Lehibe,
Michael ny Arikanjely,
Take, Hope, Love
Ary i Sofia reniny.
Ivan Ny Fahari-po,
Mijoro eo anoloanao aho.
Amin'ny anaran'ny Ray sy amin'ny Zanaka ary amin'ny Fanahy Masina.
Miezaha hanorina fifandraisana amin'ny tontolo hafa, mba hanampy anao hahatratra izay irinao. Nefa, aza miala, satria ny majika maizina dia toy ny tadio, izay misy vokany ratsy.
Inona no dikan'ny 40 andro aorian'ny fahafatesana?
Ilay Andriamanitry ny Ady ao amin'ny Mythology Grika
Ny Hyperborea - ny sivilizasiona nanjavona nataon'ny Slavy fahiny - ny antony mahatonga ny fahafatesana
Iza no azo antsoina ho an'ny Halloween?
Ankh dia midika hoe
Chernobog - mpitondra ny haizina tao Tonizia
Misy eo amin'ny tena fiainana ve ny Bill Cipher?
Vorona amin'ny giro
Fitafy ho an'ny torapasika sy fitsaharana
Demi Moore tamin'ny fahatanorany
Bokotra fankalazana ny Paska
T-shirt miaraka amina printy - vahaolana amin'ny famolavolana tany am-piandohana nandritra ny fotoana rehetra
Fiomanana amin'ny fanatsarana ny fahitana
Salady misy pepera - voankazo
Kitapo fanamboamboarana vita amin'ny karatry ny tanany manokana
Famokarana voaloboka amin'ny lay
Ahoana no fomba hanamboarana akanjo haingana?
Amin'ny daty inona no anaovana ny sezareana voaomana?
Sakafo tsotra ho an'ny fialantsasatra
Famantarana ny PMS